> Resource> Naghachi> Olee otú iji naghachi faịlụ site MMC (Multimedia Kaadị)
MMC, mkpụmkpụ maka multimedia kaadị, bụ ihe dị mfe siri ike ala flash dijitalụ nchekwa na ngwaọrụ. Ọ na-emekarị na-eji zọpụta photos, music, vidiyo ma ọ bụ ndị ọzọ na akwụkwọ faịlụ, na ọtụtụ ndị na-eji na ekwentị mkpanaaka. Ọma, ihe ma ọ bụrụ na data nke a MMC kaadị-efu? Anyị nwere ike naghachi faịlụ site na ya otu ihe ahụ dị na-agbake site a nkịtị na kaadị ebe nchekwa? Ọ bụrụ na ị okosobode nke a, echegbula. Ị maa nwere ike!
Olee otú ịrụ a MMC data mgbake?
N'ezie, ọ bụ a dị mfe ọrụ ime a MMC kaadị mgbake. Ihe ị chọrọ bụ a MMC mgbake usoro. I nwere ike ịgbalị Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac ma ọ bụrụ na ị na-eji a Mac.
Download free ikpe version n'okpuru. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị usoro.
N'agbanyeghị na ị furu efu photos, videos, ọdịyo faịlụ, ma ọ bụ ndị ọzọ na ụdị akwụkwọ, a MMC mgbake software nwere ike inyere-ahụ na ha azụ na 3 nzọụkwụ. Ebe a ka na-agbalị na Windows version omume ọnụ.
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị, ị ga-esi na interface dị ka ndị na. Jikọọ gị MMC kaadị na kọmputa na-eso ọkachamara n'ihu.
Step1. Họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi n'aka gị MMC kaadị.
Step2. Họrọ gị MMC kaadị (Mpụga mbughari ngwaọrụ).
Step3. Kwado miri Doppler ọ bụrụ na gị MMC e Ị. Bụrụ na ọ bụghị, kwuo na ya ma na-anọgide na.
Step4. Preview na ego na-agbake faịlụ na ị chọrọ.
Mgbe naghachi faịlụ, adịghị azọpụta ha na mbụ MMC kaadị ma na kọmputa gị, ịtụle data nchekwa.